Misy sazy mandrakizay ve - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Misy sazy mandrakizay
Tetsy an-daniny kosa, dia nivavaka ho an'ireo miaramila i Jesoa tamin'ny filazany hoe: "Dada ô, avelao ny helony, tsy fantatr'izy ireo izay ataony." Saingy ny Kristiana sasany dia mampianatra fa Andriamanitra irery ihany no mamela ny helok'izay, talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao dia efa nanambara mialoha izy ireo fa ho voavela heloka. Eny, raha marina izany, tsy tokony ho nanao fiovana lehibe tokoa ny vavak'i Jesosy, sa tsy izany?
Hoy i Jesosy: “Aiza eo aminareo no misy ray, izay mangataka hazandrano, ka manome bibilava ny zanany hahazoany hazandrano? ... Raha ianareo, na dia ratsy aza, mba mahay manome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy! (Lioka 11,11- iray).
Ny marina dia mitovy amin’ny nanoratan’i Paoly antsika hoe: “Tena tia izao tontolo izao Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao » (Jao. 3,16- iray).